Imigomo Yokusebenzisa - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Siyakwamukela ku-www.China-Flag-Makers.com. Sinikeza iwebhusayithi yethu njengesevisi kumakhasimende ethu. Sicela ufunde le Migomo Nemibandela ngokucophelela. Le Migomo Nemibandela ilawula ukufinyelela nokusebenzisa kwakho i-www.China-Flag-Makers.com.
Asilokothi senze ikheli lakho le-imeyili kanye neminye imininingwane yangasese itholakale kunoma iyiphi enye inkampani noma inhlangano ngaphandle kwemvume yakho. Uma usinika ikheli lakho leposi, ungathola izincwadi zezindaba ngezikhathi ezithile ngolwazi ngemikhiqizo nezinsizakalo ezintsha noma ngemicimbi ezayo. Uma ungafisi ukuthola ukuthunyelwa okunjalo, sicela usazise ngokuthumela i-imeyili, usishayele noma usibhalele ku- sales@china-flag-makers.com.
Uma uthola ukuthi i-oda lakho alithunyelwanga ekhelini lakho eliqokiwe, sicela uxhumane nathi futhi abaxhasi bethu bezinsizakalo zamakhasimende bazoxhumana nenkampani yezokusebenza ngaphakathi kwe-24H bese beyithumela kabusha lapho iya khona ekuqaleni. Kodwa-ke, i-China-Flag-Makers ithembisa ukwenza umsebenzi wokuphrinta futhi iwuthumele ekhelini lakho elibekiwe uma isikhathi sethu sokuphendula sesiphelile ngo-24H, mahhala.
I-China-Flag-Makers iqukethe imidwebo, izithombe, izithombe, izakhiwo zemibhalo, umsebenzi wobuciko, umbhalo, amafonti, amathuluzi esoftware, nolunye ulwazi (olubhekiswe kulo lapha ngokuthi "Okuqukethwe"). Leli Sayithi nakho konke okuqukethwe kuyimpahla ene-copyright ye-China-Flag-Makers. Wonke amalungelo akulesi Sayithi nokuqukethwe kwayo agodliwe emhlabeni wonke. Akuvunyelwe ngokuphelele ukugcina ikhophi, ukusabalalisa, ukushicilela, noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yokuqukethwe ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngokusobala kule Migomo Nemibandela. I-China-Flag-Makers iyaligodla ilungelo lokungeza, ukususa, noma ukuguqula noma iyiphi ingxenye yokuqukethwe nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini.
Ngokungena noma ngokusebenzisa i-www.China-Flag-Makers.com uyavuma ukuboshwa yiyo yonke imigomo nemibandela kanye nanoma yimiphi imihlahlandlela, imikhawulo noma imithetho eyengeziwe engathunyelwa maqondana nezigaba ezithile noma izinsizakalo zale webhusayithi. I-China-Flag-Makers iyaligodla ilungelo lokwenza ushintsho kuleli Sayithi nakule Migomo Nemibandela nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwalesi Sayithi futhi kuzothathwa njengesivumelwano sakho ukuthi sizoboshwa nganoma yikuphi ukuguqulwa, ukuguqulwa noma ukuvuselelwa okunjalo.
Uyavuma futhi ukuthi singakunikeza konke ukuxhumana kwezomthetho nezaziso kuwe ngekhompyutha ngokuzithumela ku-www.China-Flag-Makers.com noma, okhethweni lwethu, ngokuthumela i-imeyili ekhelini le-imeyili osinike lona ngenkathi ubhalisa kuwebhusayithi yethu. Ungayihoxisa imvume yakho yokuthola ukuxhumana okuvela kithi ngokuthumela i-imeyili ku sales@china-flag-makers.com. Kodwa-ke, uma uhoxisa imvume yakho yokuthola ukuxhumana kwethu ngekhompyutha, kufanele uyeke ukusebenzisa i-akhawunti yakho ku-www.China-Flag-Makers.com.